Etu esi enweta obere ego na 2021 - Mụta 2 Trade Ultimate February 2021
Etu esi enweta ego na 2021
Might nwere ike ịhụla ihe nkiri ahụ Nnukwu Short - ebe Michael Burry mere ọtụtụ ijeri dollar site na imebi ụlọ ọrụ na-ere ahịa na US na 2007 tupu ọ daa. Agbanyeghị, ị maara na ire ere dị mkpirikpi maka ndị ahịa niile n'agbanyeghị agbanyeghị ego ma ọ bụ nka?
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-ejegharị gị na otu esi eme ngwa ahịa na 2021.
Iji malite, anyị ga-atụle ins na out nke ihe obere ire ere bụ yana otu o si arụ ọrụ. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-egosi gị ihe ị ga - eme iji rite uru na obere ire ere. Na mmechi - anyị ga-egosi usoro achọrọ iji belata ire ebuka site na nkasi obi nke ụlọ gị!
Zụrụ XRP na etoro ebe a!
Ha nwere ihe karịrị ahịa 800, cryptocurrencies, na ETF na-akwụghị ụgwọ ọ bụla
Nkwụnye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ ụlọ akụ
Zuru okè maka ndị ahịa ọhụụ
Kedu ihe na-ere obere? Ihe Ọkpụkpọ Dị mkpụmkpụ
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ‘ịga mkpụmkpụ’ ma ọ bụ ‘ire mkpụmkpụ’ bụ usoro ịkọ nkọ na akụnụba ga-agbada. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, karịa ịzụta mbak na ọdịnala ọdịnala n'ihi na ị chere na uru ahụ ga-abawanye, ị na-eme n'ezie ịkwaga ego na na olile anya na nke ọzọ ga-eme.
Iji maa atụ, ka anyị were ya na $ 420 kwa otu, ị chere na ebuka ebuola oke ego Tesla. Site n'iji ụlọ mkpofu afọ ochie, ị gaghị enwe ike irite uru site na nkwupụta a.
Otú ọ dị, site na iji ntanetị Fzụ ahịa CFD n'elu ikpo okwu, ị nwere ike idowe a na-ere iji. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ebuka Tesla adaba na uru, ị ga-enweta uru. Echegbula, anyị na-akọwa intricacies nke CFD ere iwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ zuru ezu mgbe e mesịrị.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na echere obere ere naanị maka ebuka. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ịmara ebe ị ga-ele anya, ị ga-eme mkpụmkpụ maka klaasị ọ bụla na-aga. Nke a gụnyere ihe niile site na indices na ETFs maka ọmụrụ nwa na gold. Ọ dabara nke ọma, ụkpụrụ niile edepụtara na Ntuziaka Ego a Short Short Guide na-adịgide adịgide maka akụrụngwa ego niile.
Ihe Nlereanya nke ire ere
Anyị na Mụọ 2 Azụmaahịa na-achọpụta na ihe atụ bara uru nke isiokwu gbasara ego nwere ike inyere aka kpochapụ alụlụ ahụ. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-eweta ihe atụ ole na ole bụ isi nke obere ire ere dị ka ọ dị.
Ihe Nlereanya 1: Shortga Short na IBM Stocks
Na nke a dịruru ná njọ, i kweere na IBM ebuka na-overpriced.
N'oge ederede, ebuka IBM bara uru na $ 110 kwa
I kpebiri ire ngwa ahịa 10 dị mkpụmkpụ, na-ewere oke ngụkọta gị na $ 1,100
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, mbak IBM ruru $ 990 - na-anọchite anya mbelata 10%
Na-enwe obi ụtọ na uru gị n'ihi ya ị kpebiri ịkwụ ụgwọ ọnọdụ gị
Na mkpokọta osisi $ 1,110 - ị ritere uru nke $ 110 (10%)
Ihe Nlereanya 2: Shortga Short na Facebook Stocks
Na nke a, ị kwenyere na ebuka Facebook nwere ike ịga n'ihu na-adị obere oge.
N'oge ederede, ọnụ ahịa Facebook bara uru na $ 277 n'otu n'otu
I kpebiri ire ngwa ahịa 50 dị mkpụmkpụ, na-ewere oke ngụkọta gị na $ 13,850
Fewbọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, mbak Facebook dị $ 263.15 - na-anọchite anya mbelata 5%
Na mkpokọta osisi $ 13,850 - ị ritere uru nke $ 692.50 (5%)
Olee Otú Sre ere ere na-arụ?
N'ihe banyere nkọwapụta, enwere ụzọ abụọ ị ga - esi ree ere ahịa. Nke a na-ekpuchi ụzọ ochie, nke siri ike, ma dịkwa oke ọnụ nke 'ịgbaziri' ebuka n'ụlọ ụlọ na-ere ihe, na-ere ha ozugbo azụ ka onye na-ere ahia, wee zụrụ mbak ahụ n'aka onye na-ere ahịa na ụbọchị ọzọ.
Mgbe ahụ ị nwere ụzọ ọhụụ, digitized nke mkpụmkpụ mbak site na CFDs. Nke a ga - enyere gị aka imezu ebum n’uche gị n’ụzọ dị oke mkpa ma dịkwa mma. N'ezie, imirikiti nyiwe azụmaahịa CFD nke anyị na-akwado ga-enyere gị aka ibute ọrụ n'efu.
Tupu anyị agaa n'ihu, ọ ga-akacha mma ka anyị kọwaa ihe CFDs bụ. Ka emechara, a na-aga ga-kasị dị irè ụzọ nke ị shorting ebuka online.
Short-ere site na CFDs
CFDs (nkwekọrịta-maka-iche) bụ akụrụngwa ego nwere ike ịre n'ịntanetị. Ngwongwo na-akwado ya n'onwe ya. Kama nke ahụ, ọ bụ naanị arụ ọrụ 'nsuso' ọnụahịa nke akụ ahụ kwuru. Iji maa atụ, ka anyị were were na ọnụahịa Disney dị ọnụ $ 124.06 na New York Stock Exchange (NYSE).
N'aka nke ya, onye ị họọrọ CFD na-ere ahịa na-enye ahịa na mbak Disney n'otu ọnụahịa ahụ. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na Disney mbak mụbara na $ 124.76 na nkeji ole na ole ka e mesịrị, dị ka CFD.
Dịka i nwere ike iche n'echiche, ndị CFD na-enyocha ọnụahịa oge nke akụnụba, nke pụtara na ha na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ahịa. Ọbụghị naanị nke a, mana CFDs bụ ụzọ dị ọnụ ala iji zụọ ahịa ịchọrọ, ị nwedịrị ike itinye ihe nkwụnye ego.
Yabụ kedu ka nke a si metụta ire ere dị mkpụmkpụ?
Ọfọn, uru ọzọ nke CFDs bụ na ị nwere nhọrọ nke ịtụkwasị ihe ịzụta ma ọ bụ ire ere. Site na itinye iwu ịzụta, ị na-eche maka ọnụahịa nke CFD na-abawanye. Ọ bụrụ na ị na-etinye a na-ere iji, ị na-eme ndị na-abụghị. Dị ka ndị dị otú a, nke a bụ otu ị ga - esi belata mkpokọta n'ịntanetị!
Yabụ ugbu a ịmara na ịkwesịrị ịtọ ahịa ire ere na onye na-ere ahịa CFD na obere mkpụmkpụ, ka anyị kọwakwuo otu esi arụ ọrụ.
Iji dokwuo anya, site na ịtụkwasị ere, ị na-agwa onye na-ere ahịa gị na ị kwenyere na mbak ga-agbada na uru. Ọ bụrụ na ha emee, ị ga-enweta uru. Ọ bụrụ na ha abawanye uru, ị ga-atụfu ego.
Yabụ, ka anyị were ya na ịchọrọ ịkpụ mkpụmkpụ Ford Motor. N'oge ahia gị, a na-ere mbak ahụ na $ 8.03. Ugbu a, dị ka ebuka Ford anaghị akwado ngwa CFD, ịgaghị achọ ire dị mkpụmkpụ na 'mpaghara zuru ezu'. Kama nke ahụ, ịnwere ike ịzụ ahịa dị ka obere ma ọ bụ ihe masịrị gị - ọ bụrụhaala na ị ga-erute uru nke onye na-ere ahịa na nke kacha nta.
Chọrọ ịkọkọta $ 500 na Ford Motors mbak na-agbada uru
Ya mere, ị na-etinye ahịa ire ere ruru $ 500
Fewbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, Ford Motors na-ere ahịa na $ 6.70
Nke a pụtara na ha dara site na 16.5%
I nwetara ngụkọta uru nke $ 500 n'elu osisi gị
Agbanyeghị, amụma gị dị ire ere agaghị adị mgbe niile ziri ezi, yabụ ka anyị hụ ihe gaara eme ma ọ bụrụ na uru nke mbikọ Ford Motors abawanye.
Ọzọkwa, ị na-etinye iwu $ 500 na Ford Motors na ọnụego ntinye nke $ 8.03
Oge na-akpụ akpụ megide gị na mbak dị ugbu a ruru $ 9.01 ọ bụla
Nke a sụgharịrị ịbụ mmụba nke 12.20%
Short gafere ahịa a, nke pụtara na mmụba na-ebute nfu
Na mkpokọta $ 500, i furu $ 61
Dị ka anyị na-akọwa na a bit ọzọ zuru ezu mgbe e mesịrị, ị nwere ike amachi gị nwere losses mgbe obere ere site ịtụkwasị a nkwụsị-ọnwụ iji.
Ego ndị dị a canaa ka ị nwere ike ire?
Na-ebute site na ngalaba ndị dị n'elu na CFDs, ohere ọ bụla enweghị njedebe. Ọzọkwa, kekọrịta CFDs anaghị akwado ezigbo ebuka ha na-eso. Dịka, nke a na-enye gị ohere ịnweta ọnụ ọgụgụ na-enweghị atụ nke ahịa ahịa.
Edere ụfọdụ n'ime ahịa ndị kachasị ewu ewu na ndị na-ere obere oge nwere ike ịdabere na-edepụtara n'okpuru:
London Exchange Exchange
Site na nke ahụ, ndị na-ere ahịa CFD ngwaahịa anyị na-akwado na-enye gị ohere ịnweta ụfọdụ n'ime ahịa ndị a:
Mgbanwe Azụmaahịa Shanghai
Ngbanwe na nhichapụ Hong Kong
Mgbanwe Ego Shenzhen
Na mkpokọta, ire ere dị mkpirikpi site na ngwa CFD na-enye gị ohere dị ukwuu iji nweta uru.
Sgwọ Shortgwọ Dị mkpụmkpụ
Akụkụ a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kachasị mkpa. Nke a bụ n'ihi ire ere dị mkpụmkpụ na-adọta ego nke ị nwere ike ị gaghị ahụ n'ụzọ ọzọ mgbe ị na-etinye ego na mbak na ọdịnala ọdịnala.
Na mbu nke ego a n'abali. Mana, tupu anyị erute nke ahụ, ka anyị kpuchie ọrụ na mgbasa.
Mgbe ị na-eji ihe ahia n'ịntanetị n'elu ikpo okwu, o yikarịrị ka ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ. A ga-ebubo nke a oge ọ bụla ị na-etinye a Buy ma ọ bụ na-ere iji. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ọrụ ahụ ugboro abụọ - mgbe ị na-emeghe na mgbe ị na-emechi.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na onye ị họọrọ na-ebo ebubo ọrụ nke 0.3%
Na-etinye $ 1,000 ere iji na Nike ebuka
Na ore ahia ebubo gị $ 3
Mgbe Nike ebuka gbadara $ 900 ị kpebiri idozi ego na uru gị site na ịtụkwasị usoro ịzụta
Nke a mechiri ahia ahụ, agbanyeghị, ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ ọzọ nke 0.3% - nke bụ $ 2.70
Ihe niile, ọrụ zuru ezu na Nike na-ere ere na-efu gị $ 5.70
Dịka anyị kwuburu na mbụ, ịnwere ike izere ịkwụ ụgwọ ọrụ mgbe ị na-eji otu n'ime ndị na-ere ahịa CFD akwadoro. Kama, ọ bụ naanị mgbasa na ego ị ga-akwụ ụgwọ abalị ka ịchọrọ ịtụle.
Mgbasa ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti nzụta na ire ere nke ngwaahịa CFD ị họọrọ. Ọ kacha mma iji rụọ ọrụ nke a na pasent dịka nke a na-enye gị ohere ịtụle ihe ịkwesịrị ịme iji mebie ọbụna.
Iji maa atụ, ịchọrọ ịkọ HSBC mbak
Gị ore awade a na-ere ego nke 20.73p
Gị ore ahia awade a Buy price nke 20.77p
Mgbasa ahụ na-arụ ọrụ na 0.2%
Nke a pụtara na mgbe emepere azụmahịa gị dị mkpụmkpụ, ị ga-adị 0.2% na uhie
Ka o siri dị, naanị mgbe HSBC mbak ga-agbadata ma ọ dịkarịa ala 0.2% ị ga-anọ na mpaghara uru
Imirikiti ndị na-ere ahịa CFD nke anyị na-akwado ka ha na-agbasa gbasaa, nke pụtara na ị nwere ike idobe ụgwọ azụmaahịa gị na nke kacha nta.
Ego a bụ ihe ị na - agaghị enwe ike izere mgbe ị na - ere obere ego. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ ụgwọ ị ga-akwụ maka ụbọchị ọ bụla ị ga-eme ka ọnọdụ gị dị mkpụmkpụ mepee. Mana gịnị mere? , Ga - eji CFDs mee ka ere ere dị mkpụmkpụ n'ịntanetị - yana ngwaahịa CFD bụ 'leveraged'.
Ọbụlagodi na ị naghị etinye ikike (ịzụ ahịa na oke), nke a ka bụ ikpe. Dị ka ị nwere ike ịma, ngwaahịa leverage na-abịa na ọnụego ọmụrụ nwa - nke ga-adịgasị iche dabere na akụ ahụ. Ma, akụkụ ya bụ na nke a ga-eri n'ime uru azụmaahịa gị.
A na-ahazi ego a na-emefu ego abalị dịka pasent kwa afọ, mana a na-akwụ ya ụgwọ kwa ụbọchị. N'ezie, ebubo ahụ na-abata mgbe ahịa dị iche iche mechiri maka ụbọchị ahụ.
Dịka, ọ bụrụ na ị ga-ere obere ebuka site na a atụmatụ ahia ụbọchị, ị gaghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla ụgwọ. Agbanyeghị, nkeji nke ahịa ahụ mechiri - ma ị ka nwere ọnọdụ CFD, a ga-ewepụ ego ahụ n'ọnọdụ gị.
N'ihe banyere ego ole ị na-emefu ego n'abalị n'ezie - nke a ga-adabere na onye na-ere ahịa ị họọrọ. Ozi ọma ahụ bụ na ọ naghị adịkarị ka ị nwere ike iche. N'ezie, ụfọdụ ndị na-ere ahịa CFD na-enye ego ego abalị na mbak na ọnụego kwa afọ nke dị n'etiti 3-5%. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ị pụrụ ime ka ọnọdụ gị dị mkpụmkpụ na-emeghe ruo ọnwa 12 ma ọ bụrụhaala na ị na-akpata ihe karịrị ọnụego ego kwa afọ!
Etu esi achọta ego iji ere obere?
Enweghị azịza ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ maka ajụjụ a. A sị ka e kwuwe, usoro ịmata ụdị ebuka dị mkpụmkpụ chọrọ nghọta nke nyocha na teknụzụ. Dị ka ị maara nke ọma, nke a nwere ike were ọtụtụ ọnwa iji mụta ihe.
Ka o sina dị, iji nyere aka kpochapụ alụlụụ, n'okpuru anyị edepụtara ụfọdụ ihe ị nwere ike ime iji nweta ohere dị mkpụmkpụ.
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji rite uru na obere ire ere. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe niile ọ na-ewe bụ ntakịrị nke ọgụgụ isi na ịdị ngwa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, nnyocha bụ́ isi bụ usoro ịtụle otú akụkọ akụkọ dị mkpa pụrụ isi metụta uru ngwaahịa bara. Emechakwa, ọnụahịa ngwaahịa na-agbago na ala dị ka mkpa na ọkọnọ. Ojuju a na onodu a bu ihe esi eme ka uzo esi jua ahia - ma obu ka ogha n'iru.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na Amazon na-ewepụta nsonaazụ ya kwa afọ - nke ka mma karịa atụ anya ya. Kedu ka ị chere na ahịa ndị ahụ ga-esi meghachi omume? Nwere ike ijide n'aka na nke a ga-agba ndị na-etinye ego ume ka ha zụta mbak Amazon na azụ na akụkọ - na-eme ka ọnụahịa ego na-abawanye.
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ka anyị kwuo na Inovio Pharmaceuticals na-ekwuwapụta na FDA etinyela ọgwụ ikpe ọgwụ mgbochi COV-19 kachasị ọhụrụ. Ọ na-aga n'ekwughị na nke a ga-atụ ndị ahịa ụjọ ma si otú a - nwere ike ibute ire ere. N'ihi ya, nke a ga-abụ nnukwu ohere ịbanye ire ahịa n'ahịa! Agbanyeghị, ọ ga-adị gị mkpa ịdị ngwa iji bulie uru ị ga-erite.
Chọọ maka oke ego
Dị ka ọ na-adịkarị, ndị nwere ezi uche ga-eleba anya na ịchọta akụ dị oke ala dị ka ụzọ itinye ego na mbelata ego. Agbanyeghị, dịka onye ire ere dị mkpụmkpụ, ịkwesịrị ịme nke ọzọ. Nke ahụ bụ ịsị, ịkwesịrị ịchọta ngwaahịa nwere ike ịbelata karịa. Ọ bụrụ na ị nwere ike, mgbe ahụ nke a ga-enye gị ohere ịbanye ọnọdụ dị ire ere n'echiche nke ịba uru site na ọnụahịa ebufere karịa ngwaahịa.
Ma olee otu i si eme nke a? Ọfọn, otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ndị ọhụụ iji chọpụta ma ngwaahịa agafela ma ọ bụ na-abaghị uru bụ iji njikwa ọnụego. Na mbido nke a bụ ọkwa P / E.
Ọnụ P / E
Onu ogugu na onu ogugu (P / E) na-elele onu ahia ugbua nke ulo oru a karie nke ego ya. Iji nweta nke ikpeazụ a, ịkwesịrị kewaa ọnụọgụ ọnụọgụ niile gbasara na uru ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya.
Ozugbo inwetara ego gị, ị ga - ekewa ya na ọnụahịa ngwaahịa ugbu a. Nke a ga - enye gị nha. Ugbu a, ị kwesịrị iji tụnyere nke a ruru ka ụlọ ọrụ nkezi.
Iji maa atụ, ka anyị were ya na ị na-achọ GlaxoSmithKline ebuka. Ọ bụrụ na ọ nwere oke P / E nke 17, mana ọnụego ụlọ ọrụ maka ahịa ọgwụ bụ 12, mgbe ahụ enwere ike ịba ụba ya ma si otú a - weta ezigbo ohere ire ere!
Ikwu Ike Index
The ike ike index (RSI) bụ a hugely ewu ewu oru egosi na-eji na-fọrọ nke nta niile obere-ere ákwà. Nke a bụ n'ihi na ihe ngosi nwere ike ịgwa anyị mgbe a ngwaahịa overbought ma ọ bụ oversold. Ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ, mgbe ahụ RSI ga-egosi na mgbazi dị mkpirikpi nwere ike ịbụ ịme.
Ọ bụrụ na ọ dị, mgbe ahụ, nke a ga-enye gị ohere ịbanye ahịa ere na ngwaahịa. Ọchịchị isi mkpịsị aka ya na RSI bụ na ọ bụrụ na ihe ngosi ahụ mebiri 70/100 - mgbe ahụ ọ ga-abụ na ókèala overbought. Ọ bụrụ na egosi dị n'okpuru 30/100 - mgbe ahụ ọ pụtara na ebuka nwere ike buru ibu.
Kedu ihe bụ mkpụmkpụ mkpụmkpụ?
O nwere ike ịbụ na ị hụla okwu a bụ 'obere mkpirisi', mana ị maghị ihe ọ pụtara n'ezie. N'okwu dị mfe, nke a na-ezo aka na price edinam nke ngwaahịa. Karịsịa, ọ bụ mgbe uru nke ngwaahịa na-agagharị na trajectory ngwa ngwa ngwa ngwa.
N'ime nke a, ọ na-amanye ndị na-ere obere ịhapụ ọnọdụ ha ma tinye usoro ịzụta. Ha na-eme nke a n'echiche nke ibelata ihe ọghọm ha site n'ịchụso omume gbagoro agbago. N'aka nke ya, nke a na - eme ka ọnụahịa ngwaahịa rịa elu na ọsịsọ karịa, na etu esi domino kwuo ya.
Nke a bụ ihe ị nwere ike izere dịka onye ire ere dị mkpirikpi site n'ịhụ na ị na-enwe mgbe niile nkwụsị-ebe. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi arụ ọrụ, ka anyị nye gị ihe atụ dị mfe.
Iwu nkwụsị-nkwụsị mgbe ị nwere obere ego
Iwu nkwụsị na-efu bụ ihe anyị na-akwado na azụmaahịa niile - ọ bụghị naanị ebuka. Na nkenke, ha na-enye gị ohere ịmelata mfu gị na ọnụahịa a kapịrị ọnụ. Iji maa atụ, ka anyị were were na ị chọrọ mkpụmkpụ mkpụrụedemede dị mkpụmkpụ, mana ị gaghị achọ ida ihe karịrị 10% nke osisi gị. Dị ka ndị dị otú a, ihe niile ị ga - eme bụ ịtọ ntọala nkwụsị nkwụsị na ọnụahịa 10% karịa ọnụahịa ntinye gị.
Ka anyị kwuo na ọnụahịa mkpụrụ akwụkwọ dị ọnụahịa $ 1,500 ọ bụla
Think chere na ha karịrị akarị, yabụ na ị debere ahịa ere
Chọghị ida ihe karịrị 10% nke osisi gị
Dị ka ndị dị otú a, ị debere iwu nkwụsị gị na $ 1,650
Ọ bụrụ na azụmaahịa gị dị mkpụmkpụ mebiri - nke pụtara na mkpụrụedemede mkpụrụ ahịa na-abawanye, a ga-emechi azụmaahịa gị ma ọ bụrụ na ọnụahịa ruru $ 1,650
Yabụ, ọbụlagodi na mkpụrụedemede mkpụrụ osisi rịrị elu site na 20% (na - akpata ọnwụ 20% maka ire ere gị), ị gaghị atụfu ihe karịrị 10% dịka ị nwere usoro nkwụsị na ebe. Rịba ama, iwu ịkwụsị ọnwụ anaghị akwụ ụgwọ 100% ga-adaba na ahịa.
Ọ bụ ezie na nke a adịkarịghị, ọ nwere ike ime n'oge ọnọdụ ahịa na-agbanwe agbanwe. Nanị ụzọ iji hụ na nke a anaghị eme bụ ịtụkwasị a 'meela ya n'ezie n'ezie' nkwụsị-ọnwụ iji na ore ahia. Nke a ga - abụkarị ihe ga - efu gị obere ọrụ, mana ọ ga-efu ya.
Ndị na-ere ahịa kacha mma na obere ego
Yabụ ugbu a na ị maara ins na out nke otu esi adị mkpụmkpụ ebuka, anyị ga-atụle ugbu a ndị ọrụ ntanetị kacha mma iji mee nke a. Dịka anyị kpughere n'oge ntuziaka anyị niile, ndị na-atụ aro ndị na-atụ aro ndị edepụtara n'okpuru ebe a bụ ọkachamara na ngwa CFD. Nke a na-eme ka o doo anya na ị nwere ike ire ngwa ahịa niile nke ikpo okwu nwere.
1. eToro - Best Broker maka mmalite na Detuo ahia
Ọ ga - eju anyị anya ma ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere eToro, ebe ikpo okwu a bụzi ebe obibi karịa ndị ahịa 13 nde. Na ore ahia bụ a sọrọ na-eweta saịtị, dị ka ị nwere ike itinye ego na ahia akụ. Nke a kpuchiri ihe karịrị 1,700 +, na mkpokọta nke ETF, indices, ego ụzọ abụọ, ngwaahịa na cryptocurrencies.
Nwere ike ịre mkpụmkpụ ọ bụla eToro nyere. Won't gaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọ bụla, yana mgbasa na-asọ mpi. Karịsịa, saịtị a na-ere ahịa kwesịrị ka a tụlee ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ. Nke a bụ n'ihi na ikpo okwu dị mfe iji ma ọ chọghị ịma ihe ọ bụla. Ga-enwekwa ohere a free ngosi akaụntụ.
Anyị na-amasị eToro n'ihi na ọ na-enye gị ohere idetuo ndị ahịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị hụ onye na-ere obere ngwaahịa na-ere n'elu ikpo okwu, ị nwere ike ịhọrọ ịlele iwu ha dị ka-maka-dị ka. N'ihe banyere opekata mpe akaụntụ, eToro chọrọ nkwụnye ego nke opekata mpe $ 200. You nwere ike, agbanyeghị, tinye naanị $ 50 mgbe ị na-ere obere ebuka.
Paymentzọ nkwụnye ego akwadoro na onye na-ere ahịa a kacha elu gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets, na nnyefe ego. Dị ka ọ dị na mbụ, a na-achịkwa ikpo okwu a nke ọma ka ị ghara inwe nchegbu gbasara nchekwa. Akwụkwọ ikike gụnyere FCA, CySEC na ASIC.
Capital.com bụ usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị dị ukwuu iji na-ere ngwa ngwa. Ikpo okwu na-enye ọtụtụ ngwaahịa mgbanwe ị nwere ike ịnweta na pịa bọtịnụ. N'ezie, ị ga-enweta ohere karịrị 2,400 kesara CFDs site na US, UK, Japan, Italy, Norway, France, Germany na ndị ọzọ.
O nweghi ihe o bula nke ị gbanwere maka ahia gi, dika Capital.com bu uzo ahia ahia 100%. Anyị na-ahụkwa na saịtị azụmaahịa a na-agbasa agbasawanye na oke CFDs ya, nke dị mma maka ịchekwa ego azụmaahịa gị. Enweghị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ akaụntụ Capital.com gị, ma ọ bụ na ịkwesighi ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla iji wepụ.
Capital.com bụkwa oke nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa na obere osisi. Nke a bụ n'ihi na naanị mkpa ka ị zute a kacha nta ego nke £ / $ 20 ka malitere. Nke kachasị, ị nwere ike itinye ego ozugbo na kaadị debit / kaadị ma ọ bụ obere akpa. Ọ bụ FCA na-achịkwa ikpo okwu CFD a tụkwasịrị obi.
4. AVATrade - Onye Akwadoro Online CFD Broker Na Withgwọ Dị ala
AVATrade bu uzo ozo na ntanetị nke anyi na-acho. Na ore ahia nke nwere ọtụtụ ikikere-otu ikikere ma jiri usoro nchebe nke ụlọ ọrụ. Ka o sina dị, ego gị dị mma n'oge niile, agbanyeghị, ebe AVATrade pụtara n'ezie bụ na ọ na-enye nnukwu ọbá akwụkwọ bara ụba nke nwere ebuka, ndeksi, ETFs, nhọrọ, ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ngwaahịa CFD niile a na-enye site na saịtị azụmaahịa ya kachasị elu nwere ike ire. Ga-ahụ na AVATrade na-enye ụfọdụ mgbasa kacha mma na oghere CFD ngwaahịa. Ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla, yana nkwụnye ego / wepụ na enweghị ego. Naanị ịkwesịrị ịgbakwunye $ 100 na akaụntụ gị iji bido ire ere na onye na-ere ahịa a.
5. EuropeFX - Nnukwu ego na ọtụtụ nyiwe ahia
Y’oburu n’inwekwu ahia di elu, yabụ na ịchọrọ ịtụle EuropeFX. Nke a bụ n'ihi na ikpo okwu na-enye nkwado MT4 zuru oke. Nke a pụtara na ị ga - enwerịrị ihe ngosipụta teknụzụ niile na ngwa eserese eserese ịchọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma gbasara uru ọdịnihu ahịa gị họọrọ.
Ọ bụ ezie na ikpo okwu ahụ bụ ọkachamara na Forex, ọ na-enyekwa ọtụtụ klas ndị ọzọ bara uru. Nke a gụnyere nnukwu nhọrọ nke ebuka - nke pụtara na ikpo okwu dị mma maka ire ere.
N'oge na-adịbeghị anya gara aga, mkpụmkpụ ebuka bụ ihe dịịrị ndị sitere na ngalaba. Nke a bụ n'ihi na 'ụzọ ochie' nke ime ihe dị oke mgbagwoju anya - na-achọzi ka ndị na-etinye ego gbazite ebuka n'aka ndị ọzọ wee zụta ha n'oge ọzọ.
Mana, gbago ọsọ ọsọ na 2021q na gafere ma onye ọ bụla nwere ike mkpụmkpụ ebuka site na iji usoro CFD achịkwa. N'ezie, ị nwedịrị ike ibuga ngwa ngwa na itinye ego ụbọchị ndị a - na-enye gị ohere ịbawanye uru gị na pịa bọtịnụ!
Kedu ihe ọ pụtara ime ka ngwaahịa dị mkpụmkpụ?
Ọ bụrụ na ị belata ngwaahịa, nke a pụtara na ị na-atụgharị uche na uru ọnụ ahịa ngwaahịa ahụ na-agbadata.
Kedu ka ị ga-esi dị mkpirikpi ebuka n'ịntanetị?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkpụlata ebuka n'ịntanetị, ihe niile ị ga - eme bụ isonyere onye na - ere ahịa CFD. Mgbe ahụ, ọ bụrụhaala na ịmara ụdị ebuka ịchọrọ ịkpụ, naanị ị ga - etinye ahịa ahịa.
Kedu ihe bụ ngwaahịa kachasị mma iji dị mkpụmkpụ ugbu a
Y’oburu na ichoro ebuka n’uzo ichoro ichota ulo oru ndi i kwenyere na ha di elu. Ọzọ tactic bụ na-anya na ego akụkọ. Mgbe akụkọ na-adịghị mma mebiri, ị nwere ike ịga n'ihu belata mkpirisi ya.
Kedu ụgwọ m ga-akwụ mgbe m nwere obere ebuka?
Nke a dabere na ịhọrọ ikpo okwu gị. Ọ bụrụ na ị na-eji otu n’ime ndị na-ere ahịa CFD anyị akwadoro, ị gaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla na obere ebuka. Otú ọ dị, ị ga-akwụ ụgwọ ego ego abalị maka ụbọchị ọ bụla ka ị na-emeghe ọnọdụ gị - dịka ị na-ere CFDs.